Tsy mihaino ny vahoaka ny mpitarika – MyDago.com aime Madagascar
Hita mibaribary izao fa ireo mpitarika ny ankolafy Ravalomanana dia tsy mihaino na ,mahasolo tena ireo vahoaka marobe mpanohanany filoha Marc Ravalomanana.
Hita fa misaratsaraka be ihany, ohatra ny FRDL izay tena mitolona ny ho @ fiverenan’ny filoha Marc Ravalomanana sy ny fanoherana tanteraka ny mpangom-mpanjakana andry rajoelina dia tsy mba henoina. Manarak’izany dia tsy mazava koa ilay paik’ady, hanohy ny fifanarahana ve ? Sa hanangana tetezamita vaovao ?
Raha ny hita anefa dia ny ankolafy Ravalomanana no tena enjehina sy potehin’ny F.A.T, nefa ny mpitarika ity ankolafy ity indrindra no toa mitady hiray petsapetsa @ ireo mpandroba fahefana. Ny Vahoaka izay niharitra ny mafy teo @ MAGRO dia tsy resin’ny hamafisan’ny toetr’andro sy ny lacrymogène fa voadona mafy kosa ny fitaka na fomba fiasa tsy mahombin’ireo mpitarika.
Mila fiovana haingana dia haingana ny mpitarika fa tsy mahasolo ny vahoaka mihitsy izy ireo, ary tsy maneho velively ny hevitry ny mpitolona mpanohana ny filoha Marc RAVALOMANANA.
Tsy ilay sori-dalana , hono, no nosoniavina teny Ivato fa ny fanekena fa hanohy ny fifanarahana . Nefa I ingahy Simao efa nilaza fa tsy hisy fiovana intsony ny @ sori-dalana. Noho izany dia tompon’andraikitra @ fahadisoana entiny ireo mpitarika ny ankolafy Ravalomanana tonga teny Ivato, izay fanatsika avokoa.
Hatoan’ny foza kilalao sy fitaovana ireo mpitarika ireo dia manaraka an-tso-po izao lainga sy fitaka haroson’ny F.A.T izao. Rehefa tsy hisy olona ho tonga intsony eo @ MAGRO angamba vao ho tonga saina ireo mpitarika ny ankolafy Ravalomanana fa tsy eken’ny olona ny tetika entin’izy ireo miady @ F.A.T.
Maninona no tsy miara-miasa @ ankolafy telo ka manohy ilay hoe: hanagana rafitra tetezamita ? Ireny anie no tohanan’ny vahoaka fa sy ilay Sonia teny ivato e.
Farany,izaho mpanoratra dia mahafantatra tsara ny maro @ mpitarika ary miahiahy aho fa hanaraka ny lalan’I Raharinaivo ry zareo, ary ho simba sy ho potika ny vahoaka izay niharitra nandritra izay roa taona: naratra, maty, very asa, henjehina, gadraina…. Nefa toa manampy trotraka izay ireo izay hevirena ho mpitarika.
Ny filoha Marc RAVALOMANANA irery ihany no tena mimpitarika azo hitokisa, fa mpanao polifika daholo ireo misolo toerana azy.
TSY EKENA NY FOMBA FIASAN’NY MPITARIKA NY ANKOLAFY RAVALOMANANA
Auteur LazalazaoPublié le 10 mars 2011 Catégories Malagasy, Négos, Politique
4 réflexions sur « Tsy mihaino ny vahoaka ny mpitarika »
Koa dia aza mihaino andreo intsony aza é! izay inareo vaoa tonga saina f hivadika palitao tsikelikely ireo fa manao cinéma fotsiny ny 80% ireo milaza ra8 ireo tsy mahagaga fa Arema ireo taloha ,ny tena mpomba andra8 dia any ivelany daolo ,ireny nenjehiny sy voatery nandositra any ivelany reny sao vonoin’dry fatinalika !
Tongava saina amizay fa voavidindry tsotsoka daolo na ty Siama o tsisy hilaina azy ty !
Aoka miintsy ra8 no hifampidinika amin’ny Amerikana mivantana fa efa hita ty sima o doza ty fa voavidin’ny tsotsoka dia manao CINEMA izy sy chissano ,inona ary no hilalaovana ny raharahampirenena amina irakA azo tsolorana toy ireny ,tsy émissaireS no hataony fa mitady décideurs?MITADY HI DeCIDER RY ZAREO à la place ny gasy izay tsy miandry fotsiny ny vahiny !!!!
Refa tsy tonga saina amizao dia tsy izy intsony ,alefaso ny miaramila ny Usa REFA TSY HIALA RADOMELINA FA FANDANIAMPOTOANA NY AMBONY !!!
MANINONA ARY REO MPANOGAmpanjakana ireo tsy toriana any amin’ny cour pénale internationale ,eken’izao tontolo izao ange reo fa illégal fa maninona no hampatoriany i chissano sy sima o dia iza indray no manaraka ???
JEREO ny firenena fa hanjakan’ny tsotsoka sady maloto be ny tanana partout ,DIVISER POUR REGNER VE NO MANJAKA ETO DIA MBOLA JAMBA DAOLO ,ra8 angaha tsy mahay miteny hoe izaho no tokony mitondra an’i MCAR jusqu’à 2012 ,tena MATORY LE gasy an!
ARY RAHA MPITARIKA TENA IZY FA TSY MPAMADIKA KOA TSY HANDEHA HINTONATONANA ARY AMINDRY AMBASSADY TSOTsOKA ARY !
diso fantatra loatra fa reo no mampikatso ny raharaha !!!
natao hameno kianja fotsiny ny zank,i dada!may volotratra ny mpitarika ny ankolafy;tavela eo raha tara toa an,dry zafi sy ry ange e!
11 mars 2011 à 4 h 33 min
Nyolana voaloha dia tena nakaleony maro ilay hoe « am-pilaminana: syilay hoe « hivavaka » satria tsy efficace ilay izy. Maro no tena haneho @ fomba hafa toy ny diabe, action, fanaganana rafitra tetezamita tena izy sns… fa ny mpitarika dia tsy manana paik’ady.
Tsy ho kivin’izany anefa ny zanak’i dada ary tena ekeko mohitsy ny voalazan’i Bako hoe ny tena zanak’i Dada dia any ivelany avokoa., , ivelan’ny MAGRO sy Ivelani MAdagaskara. fa tsy notena zanak’i DAda ao @ MAGRO.
Précédent Article précédent : Video Ambiance milay Magro 09/03/2011
Suivant Article suivant : Tsy tokony hitondra anarana « TIM » intsony ireo mpamadika palitao toa an’i Raharinaivo sy ny Deputes miara dia aminy sy ry Yves Aimé…